FITOKANANA BIRAO : Andrasana ao Sambava anio i Hery Rajaonarimampianina
Antenaina hitondra vahaolana amin’ny tsy fandriampahalemana. Higadona ao amin’ny Distrikan’i Sambava anio alakamisy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier. 18 mai 2017
Anton-dian’izy ireo any an-toerana, araka ny loharanom-baovao, dia ny fitokanana ny Birao fiasan’ny Ben’ny tanàna ao Sambava.
Ho an’ireo mponina sasany any an-toerana dia toa efa mahazatra ny mahita ny Filoha manao fitokanana fotodrafitrasa na hatramin’ny zavatra bitika indrindra tsy dia liana ny fahatongavany akoy. Antenaina fa ho voaresaka mandritra ny fandalovan’ireto mpitondra ambony ireto ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana misy any an-toerana. Voalaza mantsy fa isan’ny anton-dian’ny Filoham-pirenena sy lehiben’ny Governemanta any Sambava ny momba ny tsy fandriampahalemana miseho lany any an-toerana. Mirongatra tokoa ity farany any amin’ny Faritra Sava sy Diana iny. Isan’ny misongadina amin’izany ny halatra lavanila sy famonoana olona vokatr’izany halatra izany.
Anisan’ny voatonontonona matetika amin’ity halatra vokatra fanondrana lafo vidy ity ny mpitandro filaminana any amin’ny Faritra Sava izay. Nambaran’ny raiamandreny iray any an-toerana fa “misy amin’ireo mpitandro filaminana ireo no miray tendro amin’ireo mpangalatra lavanila”. Nolazain’ity raiamandreny ity hatrany, efa nitatitra momba izany tamin’ny lefitry ny Lehiben’ny Etamazaoro tamin’ny fandalovany farany tany an-toerana vao tsy ela teo, ireo vahoaka ao Sambava.
“Manantena fatratra izahay fa hitondra vahaolana haingana sy maharitra ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina sy ny Praiminisitra Mahafaly Olivier Solonandrasana amin’izao fandalovany izy ireo aty aminay izao”, hoy ihany ity raiamandreny ity.
Na izany na tsy izany, raha ny fitokanana ny lapan’ny tanànan’i Sambava ihany no dian’i Hery Rajaoanarimampianina sy Olivier Mahafaly Solonandrasana izao dia toa fandaniana volam-bahoaka fotsiny izany.